UFrancisco García Pavón. I-Centennial kunye nePlinio kunye namazwi eRuidera | Uncwadi lwangoku
Ikhathuni kwi-flap yencwadi Amazwi eRuidera. Ukusuka eMingote naseCabañas.
Lo nyaka yi ikhulu leminyaka lokuzalwa ukusuka kumbhali tomellosero UFrancisco Garcia Pavon, kunye neminyaka engama-30 yokusweleka kwakhe. Ndiyindoda ecocekileyo, bendihlala ebuntwaneni bam eTomelloso naseGarcía Pavón liziko eli apha.
Sele ndithethile ngenye imini ngendalo yakhe edumileyo, intloko ye-GMT (Tomelloso Municipal Guard), engenakuthelekiswa nanto UManuel Gonzalez, IPlinio Yehlabathi elaziwayo. Namhlanje ndikhumbula ezi ephemeris nge kuhlolwa de Amazwi eRuidera, enye yeencwadi zakhe ezothusayo, ezinomdla nezinempikiswano ukuba ndincoma ukufumanisa.
1 Amazwi eRuidera
1.1 UPlinio kunye nosapho
1.2 Abalinganiswa abaninzi
UMkomishinala Anselmo Perales, weBrigade yoPhando loLwaphulo-mthetho eMadrid, Nxibelelana no ugxa wakhe kunye nomhlobo wakhe u-Manuel González alias IPlinio ukukunika ikhomishini. Kufuneke yiya kwi-incognito kwi-Ruidera lagoons ukusebenzisana kwi ityala eliyimfihlakalo kwilizwe lonke enxulumene nokuthumba.
Ke kuyahamba uPliny, into ethile ndineentloni ngenjongo yokufihla okuninzi kwaye engenakuthetha ngayo. Isizathu asenzayo iholide nosapho lwakho. Kukho esinye isizathu: phanda ezinye izikhalo ezoyikekayo eziviwa ezinzulwini zobusuku ecaleni kwamachibi kwaye ziye zaguqula wonke umntu ngeenxa zonke.
Ngaba inoveli cervantina ngakumbi yesaga. Ibekiwe ngaphakathi iimeko abaqhubeka nokuncoma nabani na odlula kulo mhlaba uthe tyaba kwaye womile. Kuyamangalisa, ukongeza nangaphezulu kwayo yonke, enye ngokucacileyo ityala lezesondo uvuthondaba olwenzeka ku Isiphelo esothusayo ethe ngomhla wayo yahlazisa abahloli beencwadi.
Kwaye into engekhoyo yi Ukutyeba kolwimi NguGarcía Pavón, inkosi ekubonakaliseni, ekuchazeni nasekubaliseni malunga La Mancha idiosyncrasy. Isiqendu malunga nokubonisana (kunye nento ayibuzayo) kaPlinio kunye noDon Lotario de Ignacio, osandul 'ukutshata oneengxaki "zokudibana" nenkosikazi yakhe, ayilibaleki. Ukucaca, hayi ukulula, ukuhlekisa, ukubuyela umva kunye neenkcazo zalapha ekhaya eyethu evela kumhlaba ongaphezulu. Ngenxa yeso sizathu sodwa, kufanelekile ukuzifundela ezabo kunye nabo bangaphandle kwale ndawo iphela.
UPlinio kunye nosapho
Inoveli apho uninzi Umlinganiso ophambili unomfazi wakhe uGregoria kunye nentombi yakhe u-Alfonsa, zihlala zisekondari kwezinye izihloko. Bona bakukhapha benomoya olungileyo, nangona besazi ukuba bangumbandela wetyala elitsha. Kodwa zikwangumbandela wezinye zeyona mihlathi mihle kwinoveli, njengale ingezantsi.
Eziqhelekileyo ziyathanda UDon Lotario, ulungele nangawuphi na umzuzu "imibuzo" yomhlobo wakhe uPlinio, ugqirha Watson manchego kunye nogqirha wezilwanyana. Ikwavela apho Ukhula lwaseKapa, okwesibini kuPliny, kunye lUAntonio uFaro kunye noBraulio ifilosofi uhlala eba izinto, Omnye wabalinganiswa abangenelelo lwabo alunakuphindwa. Kukwakho noDon Ricardo, utitshala wesikolo esiphakamileyo. Kwaye bonke baya eRuidera ukuya kubona ukuba uPlinio uqhuba njani.
Abalinganiswa ikhonkrithi yale ncwadi zi ihenyukazi uGala (ukumisela imeko ekusonjululweni kwetyala), UDon Circumciso kunye nenja yakhe uVida (abangobani ababonakala ngathi), Bazalwana Umlambo obandayo o iGarcia López (Umama nonyana abahlala kule ndawo bahlala behamba amaxesha ngamaxesha).
«Njengoko abafazi behamba phambili, wathatha ukuqaphela intombi yakhe. Uhambile woyame ngengalo kanina, emxelela izinto, ehleka ngamanye amaxesha kwaye ehambisa imilenze yakhe eqinile ngesingqi. Ismanga kanjani ukuba nomntwana. Oko, ngenxa yokuxubana kwemizimba emibini ngobusuku obunye bobusuku, umzimba omncinci osandul 'ukwenziwa noshushu, ingxowa yamandla amaninzi kangaka yabazali, ootatomkhulu, oogogo nootatomkhulu, iyakuphuma iye kumama phakathi iintlungu zakhe, yayiyinto enqabileyo kakhulu. Apho babenayo, abaphambukeli kwaye ke omnye; ewe kunjalo kwaye wethu; kodwa kunjalo nakwabanye ».
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » UFrancisco García Pavón. I-Centennial kunye nePlinio kunye namazwi eRuidera